Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Cagafta Dabiiciga ah, Xigashooyinka Warshadaha | Xuanhua
Tag Archives: Cagaf Cagaf
TY320-3 cagaf-cagafku waa mid adag oo adag, wareejinta hawo-qaadka, cagaf-cagaf nooca cagaf cagafku hago. Planetary, gudbinta wareejinta awooda taas oo Unilever ay maamusho. Nidaamka hawlgalka ee loogu talagalay iyadoo loo eegayo injineernimada aadanaha iyo mashiinka ayaa ka dhigaysa hawlgal si fudud, waxtar leh oo sax ah.
Semi-adag oo ganaax ah, sprocket sare, mashiinka elektarooniga ah ee heerka, gudbinta hydrostatic iyo isdabajoogga isdabajoogga, iswaafajinta awoodda buuxda, nidaamka otomaatiga madaxbanaan ee qaboojinta. Mashiinka elektaroonigga ah ee korontada ku shaqeeya oo leh qaab iswaafajin awood buuxda, wasakheynta hoose iyo keydinta tamarta
SD6K cagaf-cagaf waxaa ku qalabeysan mashiinka taayirka II, mashiinka haydka iyo matoorka, sedex marxaladood oo lagu yareynayo xawaaraha meeraha, nidaamka qaboojinta ee bartamaha 4d, gudbinta koontaroolka saamiga korantada iyo xakamaynta hawo-hayaha. Cagaf-cagafta SD6K waxay leedahay awood xoog leh, caqli ahaanna u dhiganta isbeddelka culeyska ..
SD7LGP cagaf cagaf waa 230 hooras nooca raad-dozer leh sprocket sare, awood wareejin awood, semi-adag ganaax iyo kontaroolada Haydarooliga. SD7LGP-230 hooras, bulldozer sprocket sare la dhexgeliyo qaab qaybsan waa u fududahay dayactirka & dayactirka, Waxay ku fududaato saliidda leh cadaadiska farqiga ...